မအေးသောင်းနဲ့ ပတ်သတ် တဲ့ သတင်းတွေ ဖွင့်ချလိုက် တဲ့ ဟန်းငြိမ်းဦး – Shwe Likes
Shwe | August 14, 2020 | Celebrity | No Comments
ဟန်ငြိ မ်းဦး ကတော့ ယနေ့မှာ လူငယ် ပရိသတ် တွေ ဝန်းရံခြင်းခံရတဲ့ မအေးေ သာင်းရဲ့ အေ ကြာင်းတွေ ဖွင့်ချလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
မအေးသော င်းက ဆို့အောက်ေ နတာကြာပါပြီ အေ ကာင့်မှာတခါ တင်ပေးဘူး ပါတယ်။ မအေးသောင်းနဲ့Remax myanar ပိုင်ရှင် m zaw latt ကအ တွဲတွေ ဆိုတာ…
အဲဒီထက်ပိုပီး သေ ချာတာက မန္တလေးရောက်တိုင်း အမြဲတည်းနေကြ Hotel Sakura Princess မှာ တခန်း ထဲအတူတူ တည်းသွား တာပဲ…။ အခန်းငှားပီးအိပ်တာ လည်း မဟုတ်ပဲ တညလုံး ဆော့က စားနေပီး😎 ဆိုတဲ့ စာသားနဲ့အတူ အဆိုပါပုံများကို ချပြလာခဲ့ပါ တယ်နော်။
မအေးသော င်းကလည်း ယနေ့မှာကျရောက်တဲ့ ချစ်သူ ရဲ့ မွေးနေ့ အတွက် စုံတွဲပုံလေး တရားဝင်ချပြရင်း မွေးနေ့ ဆုမွန် တောင်းပေး လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ မမသောင်းတစ်ယောက် ယခုလို တရားဝင် ချပြလာတော့ မကြာခင် လက်ထပ်တော့မယ်လို့ ယူဆရပါ တယ်နော်။
အခုလိုအဆုံးထိ ဖတ်ရှုပေးတဲ့အ တွက် ကျွန်တော်တို့ Page မှ အထူးပင်ေ ကျးဇူးတင် ရှိပါတယ်နော်…နောက်များမှာ လည်း အခု လိုဆယ်လီတို့ရဲ့ သတင်းများနှင့် ပြည်တွင်ြး ပည်ပသ တင်းများကို အချိန်နှင့်တြေ ပးညီတင် ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Page လေးကို Like & See First လေးလုပ်ပေးသွာြး ကပါအုံးနော်….
Source : Han Nyein Oo
ဟနျငွိ မျးဦး ကတော့ ယနမှေ့ာ လူငယျ ပရိသတျ တှေ ဝနျးရံခွငျးခံရတဲ့ မအေးေ သာငျးရဲ့ အေ ကွာငျးတှေ ဖှငျ့ခလြာတာပဲဖွဈပါတယျနျော။
မအေးသောငျးနဲ့ ပတျသတျ တဲ့ သတငျးတှေ ဖှငျ့ခလြိုကျ တဲ့ ဟနျးငွိမျးဦး
မအေးသော ငျးက ဆို့အောကျေ နတာကွာပါပွီ အေ ကာငျ့မှာတခါ တငျပေးဘူး ပါတယျ။ မအေးသောငျးနဲ့Remax myanar ပိုငျရှငျ m zaw latt ကအ တှဲတှေ ဆိုတာ…
အဲဒီထကျပိုပီး သေ ခြာတာက မန်တလေးရောကျတိုငျး အမွဲတညျးနကွေ Hotel Sakura Princess မှာ တခနျး ထဲအတူတူ တညျးသှား တာပဲ…။ အခနျးငှားပီးအိပျတာ လညျး မဟုတျပဲ တညလုံး ဆော့က စားနပေီး😎 ဆိုတဲ့ စာသားနဲ့အတူ အဆိုပါပုံမြားကို ခပြွလာခဲ့ပါ တယျနျော။
မအေးသော ငျးကလညျး ယနမှေ့ာကရြောကျတဲ့ ခဈြသူ ရဲ့ မှေးနေ့ အတှကျ စုံတှဲပုံလေး တရားဝငျခပြွရငျး မှေးနေ့ ဆုမှနျ တောငျးပေး လာတာပဲ ဖွဈပါတယျနျော။ မမသောငျးတဈယောကျ ယခုလို တရားဝငျ ခပြွလာတော့ မကွာခငျ လကျထပျတော့မယျလို့ ယူဆရပါ တယျနျော။
အခုလိုအဆုံးထိ ဖတျရှုပေးတဲ့အ တှကျ ကြှနျတျောတို့ Page မှ အထူးပငျေ ကြးဇူးတငျ ရှိပါတယျနျော…နောကျမြားမှာ လညျး အခု လိုဆယျလီတို့ရဲ့ သတငျးမြားနှငျ့ ပွညျတှငျွး ပညျပသ တငျးမြားကို အခြိနျနှငျ့တွေ ပးညီတငျ ဆကျပေးမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျကြှနျတျောတို့ Page လေးကို Like & See First လေးလုပျပေးသှာွး ကပါအုံးနျော….
ကမ်းခြေ မှာ ဘစ်ကနီ နဲ့ အမြင်တစ်မျိုးလေးဆန်းစေ တဲ့ သဇင်ဦး ရဲ့ အလန်စားပုံလေးတွေ
ဟဲဗီးဖြိုး နဲ့ အတူ ရှေးခေတ်ပုံစံ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ ကြော်ငြာအသစ်လေး(ဗီဒီယို)
ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ မိန်းမတွေ ပဲ စိတ်ဝင် စားတဲ့ သူပါလို့ အတိအလင်း ဝန်ခံလာတဲ့ ဇာဇာထက်
ဆက်စီမော်ဒယ်လ် ဖြစ်လာဖို့ အတွက် ဖြတ်သန်း ခဲ့ရတဲ့ ဘဝရဲ့ အကြီးမားဆုံး အခက်အခဲတွေကို ပြောပြခဲ့တဲ့ ဇာဇာထက်
ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ ညအိပ်ဝတ်စုံလေး နဲ့ ညို့အားပြင်းလွန်းနေတဲ့ ပုံတွေတင်ပေး လိုက် တဲ့ မရမ်ဆိုင်းနူး
အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးနဲ့ အထာကျကျပို့စ်လေးတွေပေးကာ မိမိုက်ဂေါ်လွန်းနေ တဲ့ ယွန်းမီမီကျော်
ရက်တွေသာကြာလာပြီး အခုထိ ကိုဗစ်အဖြေ တိတိကျကျ ဘာမှမသိရသေးတဲ့ အတွက် စိတ်ပူရတဲ့ အကြောင်း ရင်ဖွင်ခဲ့တဲ့ စိန်ဖြိုးလှိုင်
အရမ်းတွေကိတ်လာတဲ့ ခန္တာကိုယ်ကောက်ကြောင်း အလှတွေ ပေါ်လွင်အောင် လှလွန်းနေတဲ့ မေပန်းချီ
ပုရိ သ ကိုကိုတွေ ရင်ခုန်မြန်စေ သွားလောက်အောင် ချစ်စရာ ကောင်းနေတဲ့ ခက်ဝေမိုး ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
မသမာသူ လူတချို့ ရဲ့ အလွဲသုံးစား လုပ်နေမှုတွေကြောင့် ကြေညာချက် တစ်ခုထုတ်လိုက်ရတဲ့ ပြေတီဦးဖောင်ဒေးရှင်း